mkpoputa - Nkuzi Nkuzi
Tag Archives maka: "mkpoputa"
Here nọ ebe a: Home » ntụgharị okwu
Iji kwuo okwu ọjọọ, mana dee nke ọma: kedu njikọ dị n’etiti asụsụ na ide?
Anyị na-ede ihe abụọ ahụ: kaadị 80 nwere ihe omume
Leta mmiri: ụfọdụ egwuregwu efu na mmega ahụ bara uru
Ntinye kaadi na mmega
Nsụpe si diskette!
Kaadị akwụghị ụgwọ na leta na ụda yiri ya (bd, pb, fv)
Ose na Nnu 2.0
AK PEKỌ PPPR ANDR AND NA SALT 2.0 Pepe e Sale bụ egwuregwu kaadị kaadị 80s nke ụlọ ụlọ Neg Negro na-ekesa. Ejiri kaadị “Ntụziaka” eme egwuregwu a na [...]
Ugha ụgha! Decisionkwaa mkpebi egwuregwu
Nzọhie: echiche iji mee ka ederede bụrụ ihe na-atọkwu ụtọ